Renewable magetsi masosi uye kukosha kwawo kune ramangwana | Green Renewables
Magetsi anovandudzwa uye kukosha kwawo mune ramangwana
Zvakawanda uye zvakanyanya zviri kugadzirwa mupasi matsimba emagetsi anovandudzwa. Izvi zvinodaro nekuti kupera kwemafuta epasi kwave pedyo uye kusvibiswa kunogadzirwa nekupiswa kwegesi, mafuta uye marasha kuri kusimudzira zvakakomba shanduko yemamiriro ekunze. Iko kubatsirwa kwezvinhu zvinowedzerwazve kuri kuvandudza zuva rega rega uye kugona kwesimba tekinoroji kunoita kuti kubheja pane rimwe simba kuwedzere.
Iwe unoda kuziva izvo zvinowanikwazve simba zviwanikwa uye kukosha kwazvinazvo kune iro ramangwana renyika simba renyika?
1 Nyika inoda mamwe magetsi anovandudzwa
2 Chinja muiyo simba reEuropean modhi
3 Mhando dzakasiyana dzesimba rinowedzerwazve
4 Investment musimba rinowedzerwazve
5 Mari yezve mari yekudyara kweanowedzerwazve
6 Zvikonzero zvekushandisa simba rinowanikwazve
Nyika inoda mamwe magetsi anovandudzwa
Simba rakachena riri kuwedzera kudikanwa uye rinonyanya kubatsira. Nyika uye hupfumi hwakavakirwa pasimba rinowedzerwazve ndiyo kiyi yekuwana nzvimbo mumisika yesimba nekuwana makwikwi. Kuisa mari mumagetsi anovandudzwa, kunyangwe pakutanga kuchidhura, kunogona kutibatsira kuhwina kurwisa shanduko yemamiriro ekunze pamusoro pemakore.
Ngatiyeukei izvo zvinowedzerwazve hadzibudisi magreenhouse gasi, kana zvirinani zvishoma, zvichienzaniswa nemafuta emafuta akafanana nemafuta uye marasha.
Kune akawanda maguta eEuropean atora nhanho hombe munyika yezvinhu zvinogona kumutsidzirwa uye kuti, nekuda kwavo, vakakwanisa kudzikisira gasi rinokanganisa kupisa.
Kunyangwe mutemo weEuropean ungasave unodzvinyirira, kune maguta mahombe nepakati ari matanho maviri pamberi pemutemo. Mune mamwe mazwi, ivo vakwanisa kushanduka tekinoroji maererano nesimba rinowedzerwazve uye choutsi zvakanyanya kupfuura izvo zvinodiwa nemutemo.
Chinja muiyo simba reEuropean modhi
Kuchinja mapatani esimba kwakaomarara. Kusvika ikozvino, yakashanda nenzira "yakasununguka" nemafuta emafuta. Zvisinei, nyika yedu iri kuda kuti mhando nyowani yesimba itungamirirwe zvichibva pasimba risingabudisi magreenhouse gasi kudzivirira kumwe kupisa kwepasi.
Basa remaguta nemakambani makuru anozvipira kuchenesa magetsi akakosha kusimudzira shanduko inoenda kune itsva decarbonised energy modhi.
Kunyangwe hazvo kudikanwa kwepasi kwekuchinja kwesimba kuri kwekukurumidzira, zvinoita sekunge Hurumende iri kuteerera nzeve. Iyo PP haibheje pasimba rinowedzerwazve, asi asi ichaenderera pamwe nenyika yemafuta.
Maguta akadai seBarcelona, ​​Pamplona kana Córdoba ari mubishi rekugadzira makambani emagetsi ekushambadzira magetsi, kunyangwe nedenga iro rinoodza moyo kuzvidya uye rinoomesera basa rekusimudzira padanho remuno.
Mhando dzakasiyana dzesimba rinowedzerwazve
Ramba uchifunga kuti kune akawanda masosi esimba anomutsidzirwa. Parizvino, simba rezuva nemhepo ndizvo zvinonyanya kushanda, kazhinji.
Simba remhepo inotsvedza rinoenderana zvachose nenzvimbo yetetoni ndiro painowanikwa. Kushandiswa kwayo kukuru ndekwe kudziyisa mvura kwezvivakwa zvekugara uye zvipatara.
Kune rimwe divi, isu tinowana hydraulic simba. Hydraulic simba rinotyairwa nemapopoma emadziva. MuSpain, nekuda kwekusanaya kwemvura, huwandu hwemagetsi emagetsi akagadzirwa ave mashoma. Nemvura yekupedzisira yakanaya kubva muna Kukadzi apfuura, madhamu ari kudzora huwandu hwemvura uye magetsi emagetsi ari kuwedzera zvakare.
Kana iri yezuva rinopisa simba, chinhu chimwe chete ichi chinoitika ne geothermal simba. MuSpain zvinomera zve thermosolar zvakaganhurirwa nekuda kwekucheka kweHurumende yePP.
Investment musimba rinowedzerwazve
Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kufunga nezve mukana wekudyara mukuvandudza kwesimba rinowedzerwazve. Mune huwandu hukuru hwezviitiko, danho iri harigoneke zvachose pasina imwe mhando yemari, nekuti ine yakakwira yekutanga mari yezvehupfumi.
Kunyangwe iwe uchingoda chete kuisa mashoma ezuva maseru ekuchengetedza pane magetsi magetsi, Kuisa mari mumagetsi anowanikwazve hakuna zvakachipa. Kazhinji, mari yakaiswa mari inozvibhadharira yega mukufamba kwenguva. Chinhu chega chakanakisa chesimba rinowedzerwazve ndechekuti gore rino mutengo wemapikicha e photovoltaic wakadzikiswa, nekuti makore mashoma apfuura zvaive zvisingaite kuwana iwo.
Kune rimwe divi, kufambira mberi kwetekinoroji kwakakonzera kugadzirwa kwemaphoto e-photovoltaic zvine hunyanzvi mukuwana simba, ndosaka mabhenefiti akawanda akagadzirwa uye nguva dzekudyara dzekuwedzeredza dzakapfupiswa.
Kuisa mari musimba rinowedzerwazve kuri kuramba kuchiwedzera nekuda kwemitemo yesimba inoshandiswa neHurumende. Kune akati wandei marudzi emari ekubhadhara simba rinogona kumutsidzirwa. Izvi zvinoenderana nekuti simba rekushandisa ndere munhu here kana bhizinesi rekudyara. Zviripachena kuti huwandu hwemapuraneti ezuva anodiwa nemba yekuzvishandisa haufanani nekambani yekuisa paki yezuva.
Mari yezve mari yekudyara kweanowedzerwazve
Kana tikakumbira chikwereti chemari yekutanga tichafanira kufunga kuti, kana zvasvika pakudzosa, chichava nechido nemakomisheni. Kuti tidzivise izvi, tinogona tora wega zvikwereti kuburikidza nemakambani emari pakati pevanhu. Aya masangano anoshanda nenzira yakafanana kumabhangi asi kwete.
Makore mashoma apfuura pakanga paine kuwedzera mune zvinowedzerwazve muSpain nekuda kwerubatsiro rwakapihwa neHurumende yapfuura. Zvisinei, nekusvika kwePP rubatsiro rwese rwakanyangarika. Chii chakaita kuti boka iri rishore hutongi huripo mudare nekuda kwekutadza kutevedzera zvinodiwa nemabvumirano nezvibvumirano.
Kuisa mari mumagetsi anowanikwazve kunogona kudhura pakutanga, asi mukufamba kwenguva unenge uine vimbiso yekugadzirisa zvinhu zvese nekuwana purofiti.
Zvikonzero zvekushandisa simba rinowanikwazve
Chekupedzisira, ticha taura zvikonzero zvikuru nei uchifanira kubheja pane simba rinowedzerwazve:
Iyo inzira inoshanda yekudyidzana mukuderedza iyo kusvibiswa uye kurwisa iyo kuchinja kwemamiriro ekunze mupasi.
Iyo inobvumidza vanhu kana vanhu vari kure kana vari vega kubva kumaguta nzvimbo kuti vawane masevhisi akadai se gasi, magetsi, mvura, mafuta, nezvimwewo, izvo hazviuye nenzira yakajairika.
Ruzhinji rwezvigadzirwa zvine Inokwanisika mutengo. Zvimwe chete zvigadzirwa zvine mutengo wakakwira asi zvine zvimwe zvakanaka senge izvo zvinogara zvakasimba uye zvinoshanda, hazvisvibise, zvine mari diki dzekuchengetedza, nezvimwe. Saka mutengo unodzikiswa munguva pfupi.
Kutenga zvigadzirwa zvakasvibirira kunotsigira uyu uri kukura musika uye unofarira kugadzirwa kwe mabasa matsva mune inowedzerwazve magetsi chikamu.
Green matekinoroji anotendera kuchengetedza natural resources, gadzira zvishoma magasi anodziya y marara saka nharaunda inotarisirwa. Iyo inzira yekugadzira nekuvandudza zviitiko zvevanhu nenzira isiri kukuvadza yepasi nekudaro isingarambe ichiwedzera matambudziko aripo ezvakatipoteredza.
Kazhinji iyo ecological kana girini matekinoroji zviri nyore uye zvirinyore kushandisa kune akasiyana mushandisi zvinodiwa.
Sezvinoonekwa, matsimba emagetsi anovandudzwa ari kuwedzera kuwanda uye nhanho yeshanduko yesimba iri padyo padyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Magetsi anovandudzwa uye kukosha kwawo mune ramangwana
Rafael Sanchez akadaro
Handizive kuti nei zvichingogara zvisina kunaka nenzira yekugadzira magetsi kuSpain, tiri imwe yenyika dzakanakisa pasi rese.
muzvinhu zvinogadziriswazve chechina kana chechishanu mupasi rose pamunhu pagore, uye semusanganiswa tichava vamwe vevakanakisa muEurope.
Pindura kuna Rafael Sanz
Aya ndiwo manyuko esimba ayo hurumende dzinofanira kutanga kushandisa munyika kuti dzipe mamiriro ezvinhu ari nani uye nekuchengetedza zvakatipoteredza… ..
Hunhu nemabasa eNuclear Safety Council
Mota yemagetsi: zvese zvaunoda kuti uzive